# 1 Android Data Recovery Software na Windows & Mac - DataKit Studio
android Iweghachite data
Onye nzọpụta kacha mma maka ngwaọrụ gam akporo gị.
# 1 ihe ịga nke ọma ọnụego nke Android faịlụ na-agbake na ụlọ ọrụ.
Naghachi foto, kọntaktị, ozi, oku ndekọ, vidiyo na ndị ọzọ.
Naghachi data Android maka njehie OS, nhichapụ, njehie Rooting, njehie kaadị SD na ndị ọzọ.
Nweta data sitere na ebe nchekwa, SD Card na Samsung Samsung Broken.
Kwado ihe niile gam akporo gam akporo.
Mfe iji na kensinammuo interface.
Kwado gam akporo 11.
Zọpụta Data Gị Bara Uru na Ọdachi ọ bụla
Ọ dịghị Ihe sọrọ gị gam akporo data furu efu. Iweghachite data gam akporo nwere ike iweghachitere gị ya.
Enwere ọtụtụ ihe kpatara kpatara data furu efu na ngwaọrụ gam akporo. Enweghị nchekasị. Ihe ngbanwe data gam akporo anyi na akwado ihe banyere otutu onodu. Ka anyị lee ihe ndapụta na anyị nwere ike inye aka naghachi data sitere na ngwaọrụ android gị.
Esemokwu SD Card
Mmebi iwu Rome
Ọ dịghị Azịza
Kedu Ị nwere ike Naghachi site na Ngwaọrụ gam akporo
Naanị dobe ngwaọrụ gam akporo gị na PC na etinye DataKit Android Data Recovery arụnyere, ịnwere ike i scanomi ma gbakee ụdị faịlụ niile ịchọrọ ịghachite, gụnyere:
Kpọọ akụkọ ihe mere eme
Naghachi WhatsApp Chats na Mgbakwunye na gam akporo gị
DataKit gam akporo Data Recovery na-enyere gị aka iweghachite WhatsApp Ozi na mgbakwunye niile furu efu na gam akporo gị n’oge na-adịghị. Ọ dịghị mkpa mgbọrọgwụ! Pịa ka ịmụtakwuo
Mgbakwụnye ị nwere ike ịnweghachi na DataKit Android Recovery:
Vidiyo, Foto, Ozi olu, akwụkwọ mmado, dọkụmentị.
Olee otú Jiri Iweghachite Data Weghaara
3 Mfe dị mfe iji naghachi data sitere na ekwentị gam akporo.
Nzọụkwụ 1. Ẹkedori Android Data Recovery na PC jikọọ ekwentị gị na PC.
Nzọụkwụ 2. Họrọ ihe i scanomi.
Nzọụkwụ 3. viewhụchalụ ma họrọ data ịchọrọ, wee pịa Weghachite iji weghachi data gị.
Gbalịa weghachite data gam akporo EGO Ugbu a!
Naghachi ozi ndị furu efu, foto, kọntaktị, Ozi WhatsApp & ndị ọzọ.
Gịnị mere Iweghachite DataKit gam akporo?
18 Afọ 'Ahụmahụ, 20+ nde Ahịa gburugburu ụwa, 100% Secure, Free Tech Nkwado.
Notgaghị agahie mmemme a!
Gam akporo m agbadaghị ma agbanyeghị. Achọrọ m ka faịlụ ndekọ ọdịyo niile laghachi na mmemme a rụrụ ọrụ ahụ!
Arụ ọrụ dị ukwuu na ntuziaka na ntụziaka!
Mmemme a baara m uru nke ukwuu. Enwere m obere okwu ijikọ na weghachite foto m na vidiyo m, mana akpọtụrụ m enyemaka ndị ahịa ma ha alaghachikwute m (ngwa ngwa karịa atụmatụ) site na email nwere ntuziaka zuru ezu. Y’oburu n’ichoro ngwangwa ma ghara ihichapu faịlụ a ogologo oge gara aga, DataKit kwesiri igba gi aru.
Na-ebu n’udo ma na-eme kpọmkwem ihe ọ na-ekwu na ọ na-eme. Etufuru m otu ụyọkọ faịlụ na Huawei Mate 10 na mmemme a weghachite ha maka m.
Enwetara 99% nke Foto niile Samsung
O wutere m nke ukwuu mgbe m tufuru ihe oyiyi m mgbe m na-ebufe ha na Samsung Note 11 na mbadamba m n'oge njem dị anya site n'ụlọ. Amaara m na ha efunahụla ruo mgbe ebighi ebi ma ọ bụ na ha ga-akwụ nnukwu ego na foto mpaghara m ma ọ bụ ụlọ ahịa kọmputa iji weghachite ha. Emechara m daba na nke a wee nwaa ya ozugbo. Mgbe awụnyere ya na foto niile, ọbụlagodi ndị ehichapụ ogologo oge gara aga natara! Obi dị m ụtọ ịchọta mmemme a.
Beyond Tụ Anya Gị
Nlele n'efu tupu Iweghachite Nhọrọ
You nwere ike ikpebi ihe ị ga - agbake site na ịlele nsonaazụ a na-enyocha n'efu.
Kwekọrọ n'Ozizi na 10000+ gam akporo Ngwaọrụ
Samsung, Huawei, Oneplus, LG, Motorola, Sony, Google, Xiaomi, OPPO, ViVO, ZTE, wdg.
Naghachi data Android na onodu obula
Ihu ojii, Nọgidesiri ike na ọnọdụ Odin / ọnọdụ Iweghachite, ihuenyo gbajiri agbaji, na mmiri mebiri emebi.
Nchekwa ime na SD / Iweghachite kaadị SD / TF
Nyochaa ngwa ngwa ma ọ bụ dị omimi data sitere na ebe nchekwa SD nke ime ụlọ gị, kaadị SD / TF, na Kaadi SIM.
Olee otú iji naghachi-ehichapụ ozi na gam akporo
Etu ị ga-esi wepu eserese n’ekwentị na-agaghị agbanwu
Kachasị (Top 5) Gam akporo Data Recovery Software
Etu aga-esi nweta data ehichapụ na ekwentị Alcatel
Etu ị ga-esi gbakee oku akagbuo oku na Android
Ntuziaka kacha mma
Etu aga-esi nweta foto ehichapụ site na gam akporo
Etu esi eweghachi Huawei Ekwentị na Ntọala Factory
Lelee Oku Mkpọaka M T-Mobile na Ozi Ederede Ntanetị
Otu esi elele AT&T Text Text Online
Etu esi lelee ihe ndekọ ekwentị ikuku Cricket na ntanetị
dakọtara na Fọrọ nke nta All Android ekwentị
Lee anyị Ịnye ọnụahịa Ebe a
Usoro ịkwụ ụgwọ ga-edozi 2Checkout nke bụ 100% nchekwa.
Iweghachite Data Weghaara (Mmeri)
$55.95/ ndụ niile
Available on 1 PC;
Use it on 6 android devices;
Onyinye Ego 30 ga-akwụghachi ụgwọ.
Ịzụta ugbu a
$99.93/ ndụ niile
Available on 3 PC;
Iweghachite Data Weghaara (Mac)
Available on 1 MAC;
Ndị Ahịa Anyị Na-emekwa Nbudata
Ndabere data ekwentị gam akporo na kọmputa (Windows na Mac)
Wepu kọntaktị, sms, foto, log log, video, audio, whatsapp, document from Broken Samsung Phone ma dozie njehie ekwentị na clicks.
Nyefee data gam akporo
Nyefee data ekwentị gam akporo gam akporo gam akporo na komputa